नेपाली पब्लिक शनिबार, जेठ ३२, २०७६ ०७:४०
काठमाडौँ - प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (विप्लव) का नेता नरबहादुर कार्कीले विप्लवका मान्छे घटाएको रिपोर्ट बुझाएर सरकारले भ्रम फैलाएको बताएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘संयोग हेर्नुहोस् कति अचम्मको ? प्रधानमन्त्रीले फ्रान्समा विप्लवलाई गोन्जालो बनाउँछन्। उनको बुद्दिले के छुट्याउन सकेन भने गोन्जालो र साइनिङ पाथ माथिको दमनको नाइके फुजिमोरी थियो। उसलाई सीआइएको रबर स्ट्याम्प बनाइएको थियो। मानवता विरोधी, आम नरसंहार र दमनको मुद्दामा पेरूले कहिल्यै माफ गर्ने छैन।
मान्छे केही स्वत्वको नियन्त्रणमा पनि हुन्छ। म कमसेकम हिंसाको पक्षधर होइन। तर, आमूल परिवर्तनको सपना बोकेको मान्छे हुँ। लाग्छ यो जिम्मेवारपूर्ण भावको कुनै मूल्य हुँदैन। गजडी तालमा बोल्ने र जिम्मेवारपन सिध्याउन खोजेपछि, अनि आउँछ समय जस्तालाई तस्तै...
प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री ज्यू! भुसभित्र लागेको आगो जस्तो इन्डोप्यासिफिक सम्झौताको गहिराइमा यो देशलाई पेरुको अमानवीय दमन जस्तो साम्राज्यवादी सेना र पैसा परिचालनको योजना आइसक्यो। ‘गो यान्की गो होम’ भन्ने गीत देशभक्त नेपालीले किन नगाउने? तपाईंको सरकारलाई यान्किजको कठपूतली किन नभन्ने?
तपाईंको साझेदार इन्डोप्यासिफिक रणनीति र साम्राज्यवादी गोली खान भयमुक्त भएर म किन नउभिने ? तपाईं भन्नुहोस् खुलेर देशलाई बताउनुहोस्। च्यालेन्ज फण्डको ५६ अर्ब पेन्टागनले हाम्रो छातीमा हाम्रा आफ्नै दाजुभाईको हातबाट होली हान्ने काट्टोको रकम बुझेको हो कि होइन? मलाई कायर भएर बाच्नु छैन, मलाई आफ्नै माटोमा लुक्न’ पनि छैन। टुडिखेलमा गोली हान्ने दिन मन्त्रीपरिषदबाट पास गर्न म आँफै आउँछु।’ फ्रान्स पुगेर विदेशी मालिकको चाकरी गर्नु पर्दैन।
हामी वैैज्ञानिक समाजवाद चाहन्छौँ। हामी पिके र सिके राउतको युरोप सयरमा भियाना विश्व विद्यालयमा नेपाल बनाउने गफ दिएको जस्तो भद्दा अठोटले उभिएका छोराछोरी होइनौं। तेह्र वटा पानीजहाज भएको बंगलादेशमा एउटा डेरामा ४ परिवार किन बस्न वाध्य छन ? भारतको त्यति ठूलो रेल लिन्कमा किन मान्छे असमानताको कालो जगमा बाँच्न वाध्य छन? केपी र सिके पार्टनरशिपले फोटो देखाएर देश रूपान्तरण हुँदैन। सधैंको लागि बेवकुफ बनाउने यो जोक नगरेकै राम्रो। मलाई थाहा छ यो सयरको मुटुमा कुन पानी कसकाे हो? कस्को नसामा रगत दौडेको छ?
तर, भन्दिनँ हामी पेन्टागनका वा साम्राज्यवादीका सामु रुनेहरु होइनौं। वा आफ्नो आयु र पदको अवधिका लागि सार्वभौमिकता धरौटी नराख्ने ९९ प्रतिसत नेपालीका छोरा छोरी हाैँ। हामी त्यति बुद्धु पनि छैनौँ कि हामीलाई विक्री गरेको थाहा नहोस्। तपाईं नेपाल फर्कन पहिले नेपालीको मन मुटुमा तपाईंको तस्बिर फुजिमोरी’ जस्तो र तपाईंको साझेदार साम्राज्यवादीले देख्ने गरी ‘यान्किज गो होम’ को गीत गुन्जायमान हुनेछ। यो सजिलो परिचय र मेरो देश कस्को हातमा छ ? भन्ने व्याख्या तपाईं स्वयंले फ्रान्सबाट दिनुभएको छ।
म यति कुरा दोेहोर्‍याउन चाहन्छु, मुकुण्डो लाएर साम्राज्यवादीको चाकरी गर्ने सबै कम्युनिष्ट नेताको छोराछोरीले जिन्दगीमा आफ्नो बाआमाप्रति गर्व गर्ने छैनन्। र भन्नेछन् बाआमा मेरो बुबा भिखारी भए पनि नेपाली भएको भए हुन्थ्यो। फुजिमोरी कहाँको थियो ? सिर्फ मोहरा थियो। साम्राज्यवादी नोकर बनेर पेरुको क्रान्ति दमन गर्‍याे। तर्साउने र आत्मासमर्पण गराउने कोशिस नगर्नुहोस्। हामी हिमाल पहाड र तराइका हरेक दिन ब्युँझन जानेका छोराछोरी हौँ।
विप्लवका मान्छे घटाएको रिपोर्ट बुझाएर सरकारले भ्रम फैलाए/ तपाईंको आयु बढाउने बाध्यता भए केपी र बादल दाई, मलाई यो जुनी दास बनेर धेरै बाँच्नु छैन। गोली हान्दिए हुन्छ, मेरो रगतको रातो धाराबाट के जन्मिन्छ त्यो तपाईं अनुमान पनि गर्न सक्नुहुन्न। ईतिहास साक्षी छ, दलालको रगत, गद्दारको रगत र योद्धाको रगतबीच धेरै अन्तर छ। महसचिव विप्लव योद्धाहरूको आदर्श हो
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ३२, २०७६ ०७:४०